IINKQUBO EZINGAMA-21 ZOYILO LWESOFTWARE (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iinkqubo ezingama-21 zoYilo lweSoftware (yasimahla kunye neNtlawulo)
Iinkqubo ezingama-21 zoYilo lweSoftware (yasimahla kunye neNtlawulo)
Nazi ezona nkqubo zesoftware yoyilo lwekhitshi zokukunceda wenze okanye uhlengahlengise isicwangciso sakho somgangatho. Kwixesha elidlulileyo ukuba ufuna ukuyila ngokutsha kwaye ulungise ikhitshi lakho bekuya kufuneka uxhomekeke kubayili bezinto zangaphakathi kunye nabayili bezakhiwo ukuze benze isicwangciso ngendleko ezinkulu. Ngombulelo, kule mihla kukho isoftware yoyilo ekhitshini ekhoyo ukukunceda wenze iphupha lakho elifanelekileyo lokuphucula ikhitshi ngokwakho.
Kutheni usebenzisa isoftware yoyilo lwekhitshi? Isoftware yoyilo lweKhitshi yenye yezona zinto zibalulekileyo ekudaleni ikhitshi elisebenzayo nelinobuhle. Nokuba kugqityiwe ukwakha ngokutsha, ukulungiswa kwakhona, okanye uhlaziyo nje oluncinci usebenzisa isoftware yoyilo kuya konga imali kwaye kwandise iziphumo zeprojekthi. Ngokuqala uzibonele ngokwakho iprojekthi ngokwakho ungaziva ngcono kwizinto ozithandayo nangazithandiyo malunga nemibala, ukugqiba ukubekwa kwezixhobo, ukutyibilika, iikhabhathi kunye nezinto zokubuyela umva.
Uninzi lwesoftware yoyilo ikuvumela ukuba wakhe i-3D ebonakalayo yokuhlekisa ngendawo. Ngokwesiqhelo, ezi nkqubo ziya kuvumela utshintsho lwezinto eziphathekayo, ukhetho lwesiko kunye nokongeza okanye ukususa iziqwenga ezahlukeneyo. Oku kuya kukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni wendawo kunye nemibono eyahlukileyo ngaphambi kokuba uchithe ikhulu kwizixhobo ezingalunganga okanye imibala.
Isoftware yoyilo yasimahla yasekhitshini
Uyilo lweNdawo yokuYilwa kwamaGumbi ngu-Planner 5D
Umcwangcisi we-3D olula
Prodboard kwi-Intanethi Isicwangcisi seKhitshi
Umyili weBacksplash ekwi-Intanethi
Isoftware yasekhaya iKhompyutha yoyilo lwesoftware
Umyili wegumbi elifanelekileyo likaLowe
Eyona software yasimahla yoyilo lweKhitshi
Isoftware yoyilo lweKhitshi ehlawulelweyo
Umyili oyintloko-Suite yoyilo lweKhaya
Isoftware yoyilo lweKhitshi yeHGTV
Ukubetha ngenqindi! Isoftware
Isoftware yoyilo lweSmartDraw
Enye isoftware yoyilo inikezela ngeempawu eziza kwenza uluhlu lwezinto, emva kokugqiba ukuhlekisa ngeprojekthi, ukukwazisa nganye yezixhobo oza kuzifuna ukugqibezela iprojekthi. Ayizukukunika kuphela isoftware yoyilo lwekhitshi yokukunika umbono olungileyo wokuba yeyiphi imibala kunye nezongezo ofuna ukuzongeza kwindawo ngaphandle kokuzisa ekhaya kunye nokuvavanya iisampulu, kodwa iya kwenza nezicwangciso zomzimba.
Xa kusakhiwa okanye kulungiswa ngokutsha kufuneka iimvume ezifunekayo ukuze kuqale umsebenzi. Oku kuyakuthetha ukuba xa uvula amaphepha-mvume, okanye isicelo sokuvunywa uyakufuna iiplani, okanye imizobo. Ezi zinokuyilwa ngesoftware yoyilo, uya kuthi uzikhuphe zonke izinto ozifunayo nozifunayo, uzilinganise, kwaye uzingenise. Kwaye yile ndlela wena, ukuba uyenzela ngokwakho iprojekthi, okanye umntu oqeshwe ukwenza lo msebenzi, uya kwazi ukuba zeziphi izinto kwaye zinkulu kangakanani izinto.
Nazi ezinye zeenkqubo zesoftware zasekhitshini ezikhoyo ngoku:
Ngale nto kwisoftware yesikhangeli unokukhawuleza wenze ubume begumbi elilelakho, yongeza imibala, ukhethe ifenitshala, ukukhanya kokukhanyisa, kwaye ukhethe kwizinto ezahlukeneyo ukwenza isicwangciso sakho. Inguqulelo ehlawulelweyo ibonelela ngaphezulu kwe-3000 yezinto zangaphakathi zekhaya ukukunika uluhlu olubanzi lweendlela zokhetho. Inkqubo ikuvumela ukuba wenze uhambo lwe-3D kwindalo yakho ukuze ujonge kufutshane uyilo lwakho.
-> Cofa apha ukuze ufumane Isoftware yangaphakathi yoyilo
Umcwangcisi we-5D uya kuvumela nokuba i-amateur ukuba yenze iiprojekthi ezahlukeneyo, ngakumbi iikhitshi. Le software ibandakanya ilayibrari yemibono kuye nakubani na osokolayo ukuqala iprojekthi kunye neetemplate ezininzi ezahlukeneyo. Le software ivumela ukuyilwa kokubini kwe-2D kunye ne-3d yoyilo.
Ngokujonga kunye nokuhambisa izixhobo iya kuguqula ikhitshi lamaphupha akho libe yiprojekthi elula onokuyenza. Le software isimahla kwaye iyafumaneka kwivenkile ye-app kaGoogle yokugcina iivenkile okanye kwiifestile ezili-10.
Isoftware inokuba njalo ifunyenwe kule khonkco .
- Kulula ukuyisebenzisa
-I templates kunye nemibono yokuqalisa iprojekthi ngokukhawuleza
-Ungaba touchy ekusebenzeni nayo ngamanye amaxesha
I-Homestyler ngu-Autodesk sisoftware yasimahla ekwi-intanethi ebalekayo esuka kwisikhangeli sakho. Ikuvumela ukuba uyile uyilo lwekhitshi kwaye emva koko uthathe uhambo lwe-360 ° ukubona igumbi lakho kwelinye icala. Ukukunceda ufumane isitayile osifunayo kukho izinto ezingama-10,000 kunye neefenitshala ongazingenisa kuyilo lwakho. Emva kokuba ugqibile ngendalo yakho ungathatha umfanekiso woyilo oza kugcina kwikhompyuter yakho.
Izitayile zasekhaya ziya kunika inkuthazo kunye nemibono xa kulungiswa naliphi na igumbi. Le nkqubo ivumela imifanekiso eyiyo ye-3D kunye nemizobo eyi-2D yobungcali. I-Styler yasekhaya isebenzisa iimveliso zefanitshala zokwenyani ukwenza uyilo lokwenyani kwizinto ezizakuthengwa kwaye zibekwe ekhayeni nasekhitshini. Autodek Homestyler
Bukela iDemo yeVidiyo
- Akukho nto yokukhuphela
-Hlala ngokuhamba kwe3D ngokusebenzisa amanqaku
-Zijolise kuyilo lwekhitshi
-Ukunikezelwa okuncinci kunye nokusisiseko
-Kufuna ukufikelela kwi-intanethi
Ikhululekile ukuyisebenzisa, le nkqubo iluncedo ikuvumela ukuba uyile naliphi na igumbi endlwini yakho. Ungakhangela kumakhulu eemveliso ukongeza kwisicwangciso sakho kwaye ulandele uluhlu lwamacandelo kwiwebhusayithi yabathengisi oyithengayo. Emva kokuba uyilo lwakho lugqityiwe ungaqhuba umbono we-panoramic ye-360 degree ngombono omtsha. Undwendwelo - Umcwangcisi we-3D olula
- Isebenziseka kakuhle
-Dinga iJava ukuba ibaleke
Igumbi lokulala licebo le-3D eliza kukunceda ukongeza into oyithandayo kwizinto kwigumbi lakho. Le software iya kukuvumela ukuba uthathe ikhamera kuyo nayiphi na i-engile yendawo kwaye uyinike umfanekiso. Izinto ozibeka kwisithuba ezinje ngeziqwenga zefanitshala kunye nezincedisi zizinto ezinokuthengwa ngokwenyani ngokunjalo kwi-Intanethi.
Igumbi leStyler yinkqubo yasimahla enokufumaneka- https://roomstyler.com
- Kulula ukusebenzisa nokuthenga izinto
Unikezelo lwe3D kuzo zonke iiengile
-Iimbono ze3D azizizo ezilungileyo ezikhoyo
Umcwangcisi womgangatho unikezela uyilo olulungele iiplani zomgangatho kunye neenjongo zokuthengisa. Ngenkqubo elula ukuyisebenzisa njengomcwangcisi womgangatho ophanda ilayibrari enkulu yefanitshala, ikhabhathi kunye nezinto zokusebenza, ikhitshi lakho liya kuphila ngoko nangoko. Inkqubo iya kuvumela ukubekwa kweendonga, iifestile kunye nolunye ulwakhiwo kunye neempawu zombhalo ukubonisa ubukhulu.
Umcwangcisi womgangatho unikezela uyilo lokuqala simahla kwaye unokufumaneka- https://floorplanner.com/
- Ithala leencwadi elikhulu
-Ukubonakala okuhle kwe3D
-Uyilo lokuqala kuphela lusimahla
Isicwangcisi sekhitshi se-Prodboard kwi-Intanethi kulula kwaye sisebenzisa isoftware enokubala ngokuchanekileyo iprojekthi ngamanyathelo nje ambalwa. Le nkqubo ineengcebiso kunye namaqhinga kubasebenzisi abatsha. Le nkqubo inokudala nasiphi na isithuba njengeprojekthi nganye enikezela ukhetho lweemilo ezahlukeneyo, ubukhulu, izixhobo kunye nazo naziphi na izixhobo ezinokufuneka kuyilo lwekhitshi.
Ukongeza kwi-prodboard ekhompyutheni eyicwangcisiweyo iya kubala iindleko, amaxabiso esiseko kunye nawo onke amaxabiso emveliso. Basekela amaxabiso kwiikhathalogu abanazo kwaye zilayishiwe. Le yinkqubo yasimahla enokufumaneka- https://prodboard.com/online_kitchen_planner/
- Ukubalwa kweendleko
- Inezinto ezininzi kunye neekhathalogu ezifakiwe
Umyili we-backsplash uyinto entle xa kugxilwe ekhitshini kwi-backsplash. I-backsplash iya kuba yenye yezona ndawo zingenanto ezingenanto ukuze ziyile kwaye le nkqubo iya kuvumela ukubonwa ngaphambi kokuthenga izixhobo zokugqibela.
Umyili we-backsplash uyakukuvumela ukuba ukhethe imibala kunye noyilo lweekhabhathi, imiphezulu yeetafile kunye nomqolo obuyela umva ukudibanisa izinto ngokufanelekileyo. Izinto ezibandakanyiweyo ziya kuvela kwiimveliso ezihloniphekileyo ezikhoyo ukuthengwa.
Ukuba uziva ubambekile kwi-backsplash designer ikwabonelela ngezimvo kunye nenkuthazo esekwe kwizinto, umbala, okanye isitayile. Le nkqubo kunye nenkqubo ye-intanethi enokufumaneka- https://backsplash.com/designer
-Sebenzisa iimveliso zokwenyani
-Yenzelwe kuphela uyilo olubuyela umva ekhitshini
Uyilo lweKhaya lweHardware yinkqubo eya kubandakanya iinketho zokusebenzisa igumbi eliyilelwe kwangaphambili okanye ukuqala ngokupheleleyo ukusuka ekuqaleni. Le nkqubo izakuvumela ukongeza yonke into ukusuka kumbhobho, kwiifestile, nakwizixhobo zokusebenza zefanitshala, izixhobo kunye nekhabhathi.
Emva kokuba zonke izinto zikhethiwe inkqubo iyakwenza uluhlu lokuthenga ukunceda ukuzisa uyilo kwinto yokwenyani.
Le yinkqubo yasimahla enokusetyenziswa kwi-Intanethi kwaye ifumaneke- https://homehardware-en.2020.net/planner/UI/Pages/VPUI.htm
-Yenza uluhlu lokuthenga
I-RoomToDo yinkqubo elula kodwa enamandla. Inkqubo ivumela ukudala ngokukhawuleza iindonga nakweyiphi na imilo, kwaye iya kukuvumela ukuba uzobe ngaphezulu komfanekiso osele ukhona womgangatho. IgumbiToDo linombono we-2D kunye ne-3D kunye nokuhamba ngokujonga ikhitshi oyenzayo.
Ngezixhobo zokuhombisa kunye nokwenza ngokwezifiso ifanitshala le nkqubo izakuvumela indawo ukuba ibonakale ngokwenene njengekhaya lakho. Ukwenza lula inkqubo inezixhobo ze-snap ezilula kunye namaqhosha okwabelana ngokukhawuleza ukufumana ingxelo ngezimvo zakho ezintsha kunye noyilo.
Le yinkqubo yasimahla enokufumaneka- https://roomtodo.com
-Izinto ezininzi onokukhetha kuzo ngokwesiko
-Ukufumana ezona mpawu zibalaseleyo kufuneka uphucule uguqulelo oluhlawulelweyo
Ukucwangcisa i-wiz inenguqulo yasimahla kunye nohlobo lweshishini, olu hlaziyo luya kuba lolusimahla. Le nkqubo iya kubandakanya iitutorials ukunika i-rundown yendlela esebenza ngayo. Ukucwangcisa iwiz kuyakuvumela ukuba uzobe amagumbi, iindonga, ukongeza imvelaphi, iifestile neengcango, njl.
Le nkqubo ayifuni naluphi na ukhuphelo kodwa iya kufuna ukufikelela kwi-intanethi ukuze isetyenziswe.
Le yinkqubo enokufumaneka kwi-Intanethi kwaye isetyenziswe ekwenzeni iakhawunti ku - https://planningwiz.com
-Simahla okanye uhlaziyo oluhlawulelweyo
-Ayifuni indawo yedrive drive
Isicwangcisi sekhitshi kulula ukuyisebenzisa kwinkqubo yoyilo ekuvumela ukuba wenze izithuba nakweyiphi na indawo ngenxa yemisebenzi yeelwimi ezininzi. Inkqubo ithatha umsebenzisi ngofundiso olunamanqaku ukukhokela umsebenzisi ngeempawu ezikhoyo. Isicwangcisi sekhitshi sinefenitshala eyahlukeneyo yasekhitshini kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho: iikhabhathi, iikhabhathi, iifriji, kunye neesinki.
Le nkqubo ikwavumela ukufikelela kwiimbono ze-3D kunye nokujonga kwamehlo kweentaka. Isicwangcisi sasekhitshini yinkqubo yasimahla enokufumaneka- https://www.kitchenplanner.net
-Ngathathi sithuba kwikhompyuter yakho.
- Unemali encinci yokubekwa kwindawo
Isoftware yoyilo yasekhitshini yasimahla evela eLowe inokusetyenziselwa ukuyila ikhitshi usebenzisa itemplate okanye wenze igumbi elivela kwiinkcukacha zakho. Izinketho zokwenza ngokwezifiso ezinje ngezixhobo zokupheka, imibala, kunye nezinto zomgangatho, iindonga kunye nophahla zinokongezwa ukuze ufumane isitayile osifunayo.
Nje ukuba ugqibile unokuprinta igumbi lakho okanye uligcine. Inkqubo yesoftware iya kuthi ivelise uluhlu lwezinto onokuzisebenzisa ukuthenga izinto eziyimfuneko ukuzisa uyilo lwakho lube yinyani.
Undwendwelo - Umyili wegumbi elifanelekileyo likaLowe
-Ungasebenzisa imibala eyahlukeneyo yepeyinti, ogqityiweyo kunye nezinto
Unokubonelela ngoqikelelo lweendleko zezinto eziphathekayo
-Ayingekhe ibonakale ngokuchanekileyo njengaleyo uyibonayo ebomini bokwenyani
Yimalini ukunika isipho somtshato 2018
Isoftware yoyilo lwasekhitshini eyenziwe yi-Ikea yenzelwe ngokukodwa uyilo lwekhitshi kwaye isimahla ukuyisebenzisa ukuze ibe lukhetho olukhulu. Awuyi kufuna iakhawunti ukuze uqalise kwaye kuya kufuneka ubhalise kuphela ukuba uthatha isigqibo sokugcina izicwangciso zakho.
Enye yeenkqubo zokuma okumiselweyo kukubekwa kwikhabhathi yekhitshi egcina ikhabhathi ingadibani okusoloko kuyingxaki kwezinye iinkqubo zesoftware. Ukongeza umcwangcisi we-Ikea unoluhlu olubanzi lwefanitshala kunye nokhetho lokuhombisa kwaye ugcina uluhlu lwendleko yento nganye eyenzelwe wena. Nje ukuba ugqibezele izicwangciso zakho ezinokujongwa kwi-2D okanye kwi-3D. Enye into eluncedo kukukwazi ukuprinta uyilo lwakho ukuze uzise kwivenkile ekufuphi kuwe. Undwendwelo - UMcwangcisi weKhaya waseIkea
Ulwazi malunga noMcwangcisi weKhaya laseIkea:
- Isenokuba sisiseko kakhulu
Emva kokuxoxa ngesoftware yoyilo yasimahla eyahlukeneyo kunye nokuhamba ngeenzuzo zabo kunye nokubi kuya kuhlala kuyinto umntu ngamnye ayithandayo. Ngelixa abanye abasebenzisi bafuna ukusebenza ngokulula kunye nenkqubo kwaye babe neprojekthi elula, abanye banokuba ziingcali ngeeprojekthi ezininzi ezikhulu. Ngokusekwe kwiimfuno zomsebenzisi uya kuthatha isigqibo sokuba yeyiphi inkqubo eyona 'intle'. Kungenxa yoko le nto kukho iindlela ezininzi kangaka, kuba isoftware nganye iya kuba neenzuzo kunye neengozi zayo ngokusekwe kwiprojekthi kunye nomsebenzisi.
Umyili we-Backsplash okwi-Intanethi uya kuba yeyona software ilungileyo kumntu ozama ukuvavanya i-backsplashes kunye neekhabhathi ezikhoyo kunye neekhawuntari, ngelixa umntu owenza yonke into yokulungiswa kwekhitshi engazukuxhamla kwinkqubo enjalo.
Xa kuziwa kwinkqubo efanelekileyo, okanye endiza kuyisebenzisa ngokobuqu kwiiprojekthi ezininzi, ndingacebisa isiCwangcisi 5D okanye iProdboard. Ndicinga ukuba indleko yinto enkulu xa kuziwa ekugqityweni kweprojekthi kwaye ngelixa kulula kwabaqalayo okanye wenze ngokwakho-ukukhetha imibala kunye nokugqiba, ukuthatha isigqibo sokuba zeziphi izinto zokwakha kunye nokuba ziya kubiza malini kunzima kakhulu a umsebenzi.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili nangona ingezizo zonke iinkqubo ezenzelwe wonke umntu, mhlawumbi iindleko azibalulekanga kuwe, okanye mhlawumbi usesigaba sokucwangcisa ke iindleko kunye nezinto zokusebenza azikabikho kuluhlu oluphambili. Iikhikhini, kunye nefom yokulungiswa kwakhona iya kufuna ukuhanjiswa kwamaplanga okanye okwakhiwe ngamaqhekeza aya kuqhuba iindleko ngelixa utshintsho kwigumbi lokuhlala lunokubandakanya kuphela ukuhambisa ifanitshala kunye nobugcisa obujikeleze.
Nalu uluhlu lwesoftware ephezulu yasekhitshini enexabiso elinye okanye umrhumo wobulungu ngenyanga:
Umyili oyintloko ungomnye wabaphuhlisi abakhokelayo kunye nabapapashi be-3D yoyilo lwasekhaya. Oku kuhlala kusetyenziswa ngabayili bezakhiwo, abayili bangaphakathi, abayili bemeko-bume, kunye nokwenza ngokwakho. Njengoko le yinkqubo enkulu ifuna iPC okanye iMac ubuncinci be-4GB yememori kunye ne-5 GB yendawo ekhoyo yediski kunye nokufikelela kwi-intanethi. Le nkqubo inokuqeshiswa nge- $ 49 / mo.
Le nkqubo ikwafumaneka njengohlobo lwetyala kunye nokuthengwa. Uluhlu lwamaxabiso luxhomekeke kwinguqulelo oyikhethayo yi-Pro eyi- $ 495.00. Iidiski kunye nokuLungiswa komhlaba zingenziwa kwiinguqulelo zeSuite, zoYilo kunye nezeNgcali, ubungcali kunye nolwakhiwo lubalwa ngcono. Zineenguqulelo ezininzi zenkqubo unyaka nonyaka ebonelela ngeempawu ezongezelelweyo, imithombo yeendaba kunye nokuphuculwa kokusebenziseka.
Ngolwazi oluthe kratya landela eli khonkco - Umyili oyintloko
- Enye yeenkqubo eziphambili
-Uthatha indawo eninzi kwikhompyuter
Isoftware yeProKitchen ibonelela ngesilingo sasimahla seentsuku ezili-14 kunye noncedo lwengxoxo olusebenzayo oluya kunceda ukuqala nayiphi na iprojekthi entsha. Le nkqubo ineekhathalogu ezingaphezulu kwama-500 ezizaliswe ziimveliso ukongeza ekhitshini oyila lona.
Le nkqubo iya kufuna ukukhutshelwa. IProkitchen ikwabonelela ngoguqulelo olukwi-Intanethi olunokufumaneka apha- http://www.prokitchensoftware.com/prokitchen-online/
Jonga isifundo sendlela yokusebenzisa iPro Kitchen Software:
Isoftware yoyilo lweKhitshi yeHGTV ayifuni amava angaphambili kwaye ilungile kwiprojekthi encinci, okanye kulungiso olupheleleyo lwekhitshi. Ukuqala ngokungenisa imifanekiso yangoku yekhitshi lakho okanye ukuzoba isithuba ngaphandle uya kuba nakho ukubona zonke izinto ngaphambi kokuchitha isenti. Emva koko uya kuba nakho ukwenza ngokwezifiso izinto kwiindonga, iikhawuntari, iikhabhathi, njl.
Nje ukuba konke kwenziwe ngokwezifiso uya kuba nakho ukwenza unikezelo lwenyani lwe-3D yokuthatha isigqibo sokuba yile nto uyikhitshi lakho ukuba libukeke.
Le nkqubo inokufumaneka kwi Ikhaya leHGTV , ikwanesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-90 kwixabiso lokuthenga.
-Tsala kwaye ulahle ujongano
-Ijika lokufunda eliweni
Ukubetha ngenqindi! Inguqulelo yangaphakathi ye-Suite engu-20 inokusetyenziselwa ukwenza kunye nokuyila indawo yokuhlala yangaphakathi eneseti epheleleyo yezixhobo zokucwangcisa, ukuyila kunye nokujonga indawo oyifunayo.
Le nkqubo inezinto ezithile ezintsha kubandakanya nokunikezelwa komgangatho ophezulu wejometri ye-2D kunye nesicatshulwa, izitayile zokuzoba ngokwesiko, ukubanakho ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwi-AUTOCAD 2018, ukhetho lwesicatshulwa esityebileyo kunye nokuguqula ibha yesixhobo.
Le software ifuna i-1GB ye-RAM kunye ne-3GB yendawo yediski enzima. Inkonzo ye-Intanethi iyadingeka ukusebenzisa le nkqubo. Ukubetha ngenqindi! Isoftware yoyilo lwangaphakathi iya kukuqhubela malunga ne- $ 39.99 kwaye inokuba njalo ifunyenwe kule khonkco .
- Ithala leencwadi leMidiya elikhulu
-I-2D enkulu kunye ne-3D ebonakalayo
-Iindleko (kodwa kuncinci xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezihlawulelweyo)
Isoftware yoyilo lwangaphakathi lweSmartDraw yinkqubo yesoftware ehlawulelweyo enikezela ngesiboniso sasimahla. Inkqubo inokusetyenziselwa ukuyila ikhitshi kwaye inikezela ngeetemplate zokwenza ngokwezifiso uluhlu olubanzi lwezinto ezinje ngekhabhathi, izinto ezilungiselelwe oko, imiphezulu yeetafile kunye nokuhombisa ukufumana inkangeleko oyifunayo. Kukho inqaku lomfanekiso wokungenisa ukuba ufuna ukuzisa izinto okanye into yoyilo lwakho. Undwendwelo - I-SmartDraw
Uyisebenzisa kanjani iSmartdraw
Iimpawu ezipheleleyo zoyilo lwesoftware
Idemo yasimahla yokuzama
Umcwangcisi wekhitshi weGumbi leSketcher yisoftware ekwi-intanethi ekuvumela ukuba wenze ubume bakho bekhitshi kunye nezicwangciso zomgangatho. Unokwenza izicwangciso zakho usebenzisa ogqityiweyo ohlukeneyo, ifanitshala, kunye nokugqiba emva koko uyibone kumbono we-2D okanye we-3D.Kwimbono ye-3D ungalijonga igumbi ngee-degrees ezingama-360 ukuze uzive ngendlela eza kujongeka ngayo.
Xa ugqibile unokwenza iifoto eziphezulu ze-3D zoyilo lwakho ukugcina kunye nokwabelana ngezimvo zakho. Funda ngakumbi ngale mveliso Apha .
-Simahla kulonwabo oluncinci
-Yila i-2d kunye ne-3Dplanplans enombono we-360 ngesicwangciso esihlawulelweyo
Imali eqhubekayo yonyaka oyisebenzisayo
-Ufanele uthenge iikhredithi ukuze usebenzise amanqaku amaninzi
I-SketchUp kaGoogle sisixhobo esisisiseko esisetyenziselwa ukuzoba kunye nokwenza uyilo olwahlukeneyo. Ngelixa kusimahla ukuyisebenzisa kusisiseko kakhulu ukucebisa kakhulu. Ezinye zeempawu zokuma kwesoftware kukukwazi ukukhangela uyilo olwenziwe ngabanye abasebenzisi kwigumbi lokugcina i3D. Ukufumana isixa esomeleleyo ngakumbi seempawu zoyilo abasebenzisi kufuneka baphucule kuhlobo lwenkqubo ngendleko ye- $ 695. Undwendwelo - Umzobo kaGoogle phezulu
Ukudala iKhabinethi kuGoogle Sketch up:
-Ixabisa ukuphucula amanqaku apheleleyo
-Ngaba nzima ukufunda ukusebenzisa
Amanqaku ayiliweyo oyilo lwamaphepha
Isoftware ebalaseleyo yoyilo lwangaphakathi - Izinto zokwakha uMgangatho woYilo lwangaphakathi - Iinkqubo ezibonakalayo zePeyinti yombala
Umthetho wokuthenga iringi yokuzibandakanya
utshata njani kwi-texas
Iimpahla ezimnyama ezibomvu ezimnyama ezibomvu
ubopha njani iqhina \_
Iingoma zokudanisa ezingcono zika mama